Amacebo ama-5 wokuthi Ungakusebenzisa Kanjani Ukubuyekezwa Kwamakhasimende Ezokuxhumana Komphakathi | Martech Zone
5 Amacebo okuthi Ungakusebenzisa Kanjani Ukubuyekezwa Kwamakhasimende Ezokuxhumana Komphakathi
NgeSonto, Septhemba 9, 2018 NgeSonto, Septhemba 9, 2018 U-Olivia Ryan
Imakethe yinto enzima, hhayi eyenzelwe i- big brand kodwa futhi ngokwesilinganiso. Noma ngabe unebhizinisi elikhulu, isitolo esincane sendawo, noma ipulatifomu ye-inthanethi, amathuba akho okunyuka isitebhisi se-niche mancane ngaphandle kokuthi unakekela amakhasimende akho kahle.
Uma uxakeke ngamathemba akho nenjabulo yamakhasimende, bazokuphendula ngokushesha. Bazokunikeza izinzuzo ezinhle kakhulu ezibandakanya ukwethenjwa, ukubuyekezwa kwamakhasimende, futhi ekugcineni ukuthengisa.
Eposini lanamuhla, ngabelana ngezeluleko ezi-5 zokuthi ungasebenzisa kanjani ukubuyekezwa kwamakhasimende ezokuxhumana nabantu ukuze uthuthukise ukusebenza kwebhizinisi lakho.
1.Qonda Okufunwa Amakhasimende Akho
Ngaphandle kobufakazi bamakhasimende, impendulo eqondile kungaba nzima kakhulu ukuyithola. Izibalo oziqoqayo nge-software ye-analytics nezixazululo zisiza kakhulu futhi zinembile, kepha azikwazi ukuqhathaniswa nempendulo eqondile abalandeli bakho namakhasimende angakunikeza.
UFick Turban, CEO ku khanathang.it, kubonakala sengathi bakujabulele ukusinika ukuphawula okuqondisayo:
Inqubekela phambili yebhizinisi incike ekusebenzeni kahle. Ngasikhathi sinye, ukwenza kahle kuncike empendulweni. Lapho usuthole lokhu, uzobona ibhizinisi lakho ngokuhlukile futhi awusoze waphelelwa yimibono yokwenza ngcono.
Kusho ukuthini ukwandisa? Ngamazwi alula, izindlela zokusebenzisa kahle:
Ukwenza ngcono ubuhlobo phakathi kwebhizinisi nekhasimende
Ukwenza ngcono ukuhambisana nekhwalithi yemikhiqizo & nezinsizakalo zakho
Ukuthuthukisa i- value unique proposition
Ukugqama esixukwini futhi weqa izimbangi zakho
Ukuguqula abalandeli abalula babe amanxusa omkhiqizo aqotho
Ubufakazi beKhasimende buyisisetshenziswa sakho sokuqala esisiza ukuphawula kwangempela, okungachemi ngomkhiqizo wakho. Impendulo eyengeziwe (emihle noma emibi) uthola kulapho uzoqonda khona izethameli zakho eziqondiwe. Ngemuva kwesikhashana, uzobona amaphethini ekuziphatheni kwamakhasimende akho futhi kulapho uzokwazi ukuthi amasu akho nezinhlelo zakho zakamuva ziyathuthukisa noma zinciphise ukusebenza kwebhizinisi lakho.
2. Khomba Indawo Yokuthengisa Eyingqayizivele Yokuncintisana Kwakho
Enye indlela ephumelelayo yokwenyusa imiphumela yebhizinisi lakho ukunaka ukubalulwa komkhiqizo wezimbangi zakho kanye nobufakazi bamakhasimende.
Ungalandelela wonke amazwana awodwa noma igama lomkhiqizo usebenzisa amathuluzi wokuhlaziya wokuncintisana. Thola ithuluzi elifanelana nezidingo zakho bese ulisebenzisa ukukhomba futhi "ukubamba" amakhasimende angajabule enza umzamo wokugxeka izimbangi zakho.
Nikeza ngesixazululo esingcono ezinkingeni zabo futhi bazoshintsha izinhlangothi ngokushesha. Ungaxhumana nabo usebenzisa umyalezo wangasese, noma okungcono kakhulu, sebenzisa i-akhawunti “mbumbulu” ukuphendula ukuphawula kwabantu abangenelisekile obalandelile. Baholele ngqo kumkhiqizo wakho ngokushiya ukubuyekeza okungachemile kwezixazululo umkhiqizo wakho ongaziletha.
3. Khombisa ubufakazi obuhle kwiwebhusayithi yakho
Iyiphi indlela engcono yokusebenzisa ubuchwepheshe bezokuxhumana kunokubakhombisa kuwebhusayithi yakho? Uyabona, akuwona wonke amakhasimende angaba khona azodlula kumakhasi wakho wezokuxhumana, ngakho-ke iningi lawo ngeke likwazi ukubona imibono yamanye amakhasimende.
Ngokuya ngokuthi ufuna ukuwabonisa kanjani, ungasebenzisa ifayela le- uhlelo lokusebenza lwe-skrini yamahhala ukuthwebula ubufakazi noma ungabubhala njengombhalo bese ubathola indawo enhle kusayithi lakho. Kunoma ikuphi, khumbula ukuthi ama-95% wabasebenzisi abakwi-inthanethi maningi amathuba okuthi bathenge okuthile ngemuva kokufunda isibuyekezo esethembekile.
4. Thuthukisa Izinga Lobudlelwano Namakhasimende Akho
Nawu umthetho ongabhalwanga okufanele uwugcine engqondweni: phendula njalo ubufakazi bakho bekhasimende. Kuhle noma kubi, akunandaba. Ngokuziba izibuyekezo ongazithandi, ukhombisa ukuthi awungethenjwa. Ngokunganaki okuhle, uphuthelwa amathuba okuthuthukisa ukwethembana okungcono nekhasimende elishiye isibuyekezo futhi uzofakazela ukuthi umkhiqizo wakho awunawo amakhasimende awo engqondweni.
Ngokuphendula ngokungaguquguquki kuzo zonke izibuyekezo zakho nokushiwo komkhiqizo, uzothola inhlonipho nokwethembeka kwamakhasimende adlula nje, afuna izibuyekezo ezingakhethi.
5. Guqula Abalandeli Abathembekile Benze Amanxusa Omkhiqizo
Ukuphendula ubufakazi kuyisinyathelo sokuqala. Ukuthintana kungokwesibili. Ngaso sonke isikhathi uma uthola ubufakazi obusezingeni eliphezulu ezinkundleni zokuxhumana, nikeza impendulo ewusizo (engabonwa uquqaba) bese ulungiselela ukuzwakala ngqo komuntu owenze umzamo wokuhlanganyela ngemibono yabo.
Ungaqala ngokuthile okufana nokuthi “Hheyi, siyasithokozela isikhathi osithathile ukubuyekeza imikhiqizo / izinsiza zethu, futhi sithanda ukukwazi kangcono…” Akudingeki uzame kanzima - cishe onke amakhasimende ushiye ukubuyekeza okuhle emakhasini akho omphakathi kuzovulelwa okuningi. ”
Yini okufanele uyicele? Okokuqala, ungakhuthaza umbuyekezi wakho ukuthi enze inhlolovo ehlanganisa ulwazi ababenalo ngesayithi lakho, imikhiqizo yakho, ukwesekwa kwamakhasimende akho, njalonjalo.
Noma, okungcono kakhulu, ungabanikeza ithuba lokuba omunye wakho amanxusa omkhiqizo. Lokhu kusho ukuthi bazothola imikhiqizo yamahhala noma enesaphulelo, isinxephezelo semali, noma yini oyifunayo efanelekile, konke lokhu kuzonikezwa ukuxhaswa kwabo kwesikhathi esizayo. Umsebenzi wamanxusa omkhiqizo ukukhuthaza igama lebhizinisi nomaphi lapho beya khona, ngokusebenzisa ama-hashtag, ukwabelana ngokuqukethwe, ukuthanda okuthunyelwe nangokukhuthaza abangani nalabo abaziwayo ukuthi bahlole imikhiqizo yomkhiqizo.
Ngaphandle komphakathi othintekayo ozimisele ukubuyekeza umkhiqizo wakho, imikhiqizo, nezinsizakalo, ukukhombisa igunya ku-niche kuzoba umthwalo onzima. Amanethiwekhi omphakathi wezokuxhumana ayigolide kulabo abakwaziyo ukuyisebenzisa kahle. Phatha abalandeli bakho kangcono ngokubanikeza ikhwalithi, inani, nokunakekelwa okwengeziwe. Ngokuhamba kwesikhathi, ubudlelwano bakho namakhasimende obuthuthukisiwe obuzokwakha imiphumela emihle ezoshintsha ubuso bebhizinisi lakho.
Tags: amanxusa omkhiqizoukuncintisanaukubuyekezwa kwamakhasimendeubufakazi bamakhasimendeUFick TurbanIzibuyekezoukubuyekezwa kwezokuxhumana
U-Olivia ungumbhulogi onothando obhala ngezihloko zokumaketha kwedijithali, umsebenzi wokuziphilisa nokuzithuthukisa. Uhlala ezama ukufunda okuthile okusha futhi abelane ngalolu lwazi kumawebhusayithi ahlukahlukene.
Ungakusebenzisa Kanjani Kakhulu Ideskithophu Yakho Ukufuduka Kwamaselula